Forum serasera malagasy Mémoire-na DEA amin'ny Economie eny Ankatso mitovy tanteraka? - Dinika forum.serasera.org
Mémoire-na DEA amin'ny Economie eny Ankatso mitovy tanteraka?
Fitohizan'ny hafatra : Mémoire-na DEA amin'ny Economie eny Ankatso mitovy tanteraka?
hery - 08/07/2014 16:59
Apetrako eto ihany ity fa mino aho fa hiparitaka atsy ho atsy.
Misy mémoire anakiroa, olona roa samy hafa (ny anarana aloha dia samy hafa), sy taona nanolorana azy samy hafa ihany koa (2012 sy 2013) kanefa dia mitovy tanteraka... afatsy ny encadreur anakiray. Kanefa dia DEA hono izany. Mety misy afaka manazava ve hoe nahoana?
vazivazo - 09/07/2014 13:57
hahahha ny fanazavana farany tsotra be hamaliako azy dia kopi kolé zany hery an!
endriny - 14/07/2014 08:12
Izao no atao hoe fahaizana manara-penitra.
Raha namerina ilay faharoa ka nisy diso tsipelina ny lohateny dia mety ho very ny point-ny...
Io aza mbola DEA.
Ny mahazendana dia ity encadreur tamin'ilay faharoa ity dia efa malaza eo amin'ny samy mpampianatra eny Ankatso mihintsy amin'ity fandikana ny asa vitan'ny sasany ity. Ka tsy mahagaga.
I Rapanoelina sy Ratirarison aza moa tsy miteny koa izaho indray ity no misolatsolana. Aza fady eh...
Aza tadiavina ry zalahy ny IP-ko fa kobo aho a..
Ratoa - 19/07/2014 20:55
manala-baraka. Ny fiandohany dia teny mitovy, fa asa izay any anatiny any? Tsy nahavaky aho. Mety ho fanatsarana ny voalohany ity faharoa? Asa? satria ny encadreur roa dia mitovy. Nahoana ary ny BU no ni-archiver ny faharoa?
Manala baraka ny université anie izao. Raha tsy hoe fanitsiana ny voalohany ny faharoa
sipagasy - 02/08/2014 22:52
mmhhh dia ilay mpianatra mandika koa veh dia tsy mba menatra??? hoe ny rondohan'olona hafa no entina andihizana??? hafa koa izany kann
hery - 02/08/2014 23:12
Ratoa> Mitovy tanteraka ny votoatiny. Ny mahasamihafa azy fotsiny dia ilay fisaorana amin'ny voalohany... Ny fehezan-teny rehetra amin'ilay fisaorana aza mitovy koa afatsy ny anarana fotsiny
endriny - 04/08/2014 08:45
Isaorana ny avo fa tsy nadikany hatramin'ny daty sy ny anarana. Milay ireto mpampianatra ireto ka...
vazivazo - 11/08/2014 11:06
tsy hita moa ry zareo fa ny filoham pirenena aza moa nikabary tery Mahamasina tamin'ilay fotoana nanaovany fianianana NANDIKA NY DISCOURSn'ny an'ny Filoha Frantsay Fahiny e